झापा, सुनसरी, मोरङ र सप्तरीमा बाढीको खतरा ! - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National झापा, सुनसरी, मोरङ र सप्तरीमा बाढीको खतरा !
झापा, सुनसरी, मोरङ र सप्तरीमा बाढीको खतरा !
काठमाडौं, १५ भदौ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान शाखाले नेपालका पूर्व क्षेत्रमा बाढीको खतरा रहेको जनाएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा भारी बर्षा हुन सक्ने र त्यसले बाढी आउने जनाएको छ । शाखाले मेची, विरिङ, कन्काई, सुनसरी खोला, त्रियुगा, कोशी नदीमा बहाव बढेको उल्लेख गरेको छ । साथै कुनैपनि बेला सतर्कता तह पार गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले पूर्वी पहाडका आकाशमा क्युमोलोनिम्बस बादल जम्मा भएको र त्यसले लगातार ४÷५ घण्टा पानी पार्न सक्ने जनाएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पूर्वी क्षेत्रमा भारी बर्षा हुने र अन्य क्षेत्रमा मध्यम बर्षा हुन सक्ने जनाएको छ । बाढी पूर्वानुमान शाखाले भने पहाडी क्षेत्रमा पनि पहिरोको जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
क्युमोलोनिम्बस बादल सबैभन्दा मोटो बादल भएको र यो जमिनको केही माथि देखि १० किलोमिटर अग्लो सम्म हुने विभागले आफ्नो ट्वीटमा उल्लेख गरेको छ । बाढी पूर्वानुमान शाखाले आफ्ना आफन्तहरुलाई नदि किनारामा नजान सुझाउन समेत ट्विटर मार्फत अपिल गरेको छ ।